कोरोना संक्रमण विश्वका १ सय ८५ देशमा फैलियो, दुई लाख आठ हजारको मृत्यु – हिमालयन ट्रिबुन
HT २०७७ बैशाख १६, मंगलवार ०४:४०
विश्वभरि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको संख्या ३० लाखभन्दा माथि पुगेको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयले जनाएको छ । उसका अनुसार हालसम्म विश्वका १ सय ८५ देशमा कोरोनाभाइरस फैलिइसकेको छ । विभिन्न माध्यमहरूबाट कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर उक्त विश्वविद्यालयले विवरण सार्वजनिक गर्ने गर्छ ।
विश्वविद्यालयले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ), युरोपियन सेन्टर फर डिजिजेज् प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल, विश्वभरका सरकारी स्वास्थ्य विभागहरू, स्थानीय समाचार तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको ठूलो अनलाइन समुदायबाट तथ्याङ्कहरू लिने गरेको छ । कोभिड १९ का कारण हालसम्म २ लाख ८ हजार मानिसको ज्यान गइसकेको छ ।
विश्वमा सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमण अमेरिकामा देखिएको छ । यसैबीच कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण रोकथाममा लापरबाही गरेको आरोप लागेपछि डब्लूएचओका प्रमुखले सङ्गठनको बचाउ गरेका छन् । महानिर्देशक डा. टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयससले विश्वभरका सबै देशहरूले गत ज्यानुअरी महिनाको अन्तिममा ’सार्वजनिक स्वास्थ्य सङ्कटकाल’ घोषणा गरिएका बेला सुन्नुपर्ने थियो भनेका छन् ।
त्यसबेला चीन बाहिर जम्मा ८२ वटा मात्र सङ्क्रमण भेटिएका थिए र कसैको पनि मृत्यु भएको थिएन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पाउने अमेरिकी आर्थिक सहायता रोकिदिएका छन् । उनले डब्लूएचओले कोरोनाभाइरसलाई लिएर लापरबाही गरेको र भाइरस फैलिएको कुरालाई लुकाएको आरोप लगाएका छन् ।
कोरोनाभाइरस विरुद्ध सबैभन्दा उपयोगी हुने देखिएको कुन हो औषधि ?
Spread the loveकोभिड १९ महामारीका कारण मृत्यु हुने मानिसको सङ्ख्या दुई लाख नाघेको भए पनि यसको कारक विषाणु कोरोनाभाइरस नियन्त्रण गर्न चिकित्सकहरूलाई सघाउन सक्ने औषधि प्रमाणित भइसकेको छैन । अहिलेसम्म हामी जीवनरक्षक औषधिको विकासमा कुन अवस्थामा छौँ त ? उपचार पत्ता लगाउन के भइरहेको छ ? अहिलेसम्म १५० भन्दा बढी […]